ခက်ဦး – မင်္ဂလာဆောင် | MoeMaKa Burmese News & Media
စိန်ရောင် ပလက်တီနမ်ရောင် တဖျပ်ဖျပ်
အပြုံးတု အပျော်တုတွေ တဖျပ်ဖျပ်
တေးသံအတု မီးရောင်စုံပြိုးပျက် အတုတွေ
မူးဝေ ရစ်အီ ယိမ်းထိုးနေကြတယ်
ငွေကြေးအတုတွေ တချွပ်ချွပ် လေထဲဝဲထုတ်
ခရိုနီ ခရိုပြာ ခရိုကာလာရောရာတွေ
မြို့ဝန်ရူး နယ်ဝန်ရူး ဝန်ကတော်ရူးတွေ
အဘသံ မိုးမွှန် အမသံ အလုံးဆို့ပြီး
သား သား သမီး သမီး ကျွက်ကျွက်ညံလို့
ချီးယားသံ တခွင်ခွင် တခွပ်ခွပ်နဲ့
လက်ခုပ်အတုတွေ …… … ……. …. …. ..
၂၆ . ၁၀ . ၂၀၁၅